Amava amnandi okufunda incwadi ngeempumlo zakho | Uncwadi lwangoku
UAlex Martinez | | Ababhali, Inoveli, Inoveli emnyama, Uloyiko
Uqweqwe lwencwadi «El isiqhumiso».
Kutshanje, ndikhangela kwiishelufa zethala lam lebhedi, Ndifumene incwadi eyandothusayo njengencwadi eyayingandothusi ixesha elide. Ndimele ndivume ukuba ndimqwalasele ngenxa yokuziqhelanisa nefilimu ekhokelwa nguTom Tykwer. Into engafane yenzeke kum kodwa, ngeli xesha, indivumele ukuba ndihlangane nento ngokoluvo lwam yenye yeenoveli ezimangalisayo zenkulungwane yamashumi amabini.
"Amafutha" yenye yezo bhanyabhanya ethi xa ibonwa ishiye akukho mntu ungakhathaliyo ngenxa yecebo kunye nomfanekiso othusayo. Into ethi, emva kokuyibona, ndiyigcine engqondweni yam ixesha elide kwaye ndavuka, njengevumba elilibalekileyo, xa ndiziva eshelufini ubukho bencwadi encinci enesihloko esifanayo "esiyindida".
Ngokusengqiqweni andikwazi ukumelana nokuthatha, kodwa hayi ngaphambi kokuba neentloni ngokungazi kwam ngokupheleleyo Ndingakhange ndibone kude kube lelo xesha lokuba imvelaphi yesiqwenga sefilimu esibe nefuthe kum ekuqaleni yayivela encwadini endandingayazi kwaphela.
Nje ukuba ndiyifunde, ndiye ndayiqonda imeko eyenzeke kum ngelixa bendonwabela inoveli engazange yenzeke kum kwaye ngokungathandabuzekiyo ichaze lo msebenzi njengowenyani. Umbhali, uPatrick Süskind, wakwazi xa ebhala eli bali ngeminyaka yoo-80 ukwenza into bambalwa kakhulu ababhali abangayenza..
"Isiqholo", ngale ndlela, asihlukanga ngenxa yesiqwenga saso kodwa kungenxa yendlela esinikwe ngayo nendlela ezichazwa ngayo iziganeko ezenzekayo. Ngokungafaniyo nezinye iincwadi, kule meko, umfundi ulazi ibali ngendlela yokujoja. Inkcazo yendawo yenziwe yolfactory kwaye abalinganiswa kunye nemeko baziwa ngokuba livumba labo hayi ngokwasemzimbeni wabo. ifiziksi.
Ke ngoko, ngelixa ufunda, enye iyahambelana namavumba ahlukeneyo achaze yonke into eyenzekayo. Ukuhamba ngolu hlobo, ukuya kwinkulungwane yeshumi elinesibhozo ngokusebenzisa intsingiselo entsha kunye neemvakalelo ezivela kuyo. Iphunga liba, ngale ndlela, i-axis esisiseko yayo yonke into, esisiseko sokuqonda ukuvela kwengxabano.
Isixhobo sobuchule esinobuchule esenziwe nguSüskind esisibonisa sona ngomlinganiswa ophambili wenoveli, uJean-Baptiste Grenouille. Umbulali obhinqileyo onesakhono esingaphaya kwendalo sokubamba ivumba. Inoveli eyahlukileyo eyahlukileyo, eyimbali kunye neyothusayo ebandakanya umfundi ngelifu lamavumba okwenyani azo zonke iintlobo.
Kuyonwabisa ngokwenene ukuba oku Umthengisi ogqibelele eyapapashwa ngo-1985 yayiyinoveli yokuqala eyabhalwa ngumbhali wenoveli waseJamani Indlela engaqhelekanga, efumanekayo kwabambalwa kakhulu, ukuqala ikhondo lomsebenzi njengombhali.
Ngale nto ndithi ntle ngaphandle kokukukhumbuza ngesicatshulwa esabhalwa nguClaudio Magris apho athi: "Umgxeki woncwadi lokwenyani ngumcuphi, kwaye kungenzeka ukuba ukuthabatheka kwalo msebenzi ungenakuphikiswa akuquki ukutolikwa okunobunkunkqele, kodwa kunuka ivumba elikhokelela kwidrowa, kwilayibrari, kwimfihlo yobomi "
Ngokuqinisekileyo, njengoko uMagris eqinisekisa, ivumba elindikhokelele ekufumaneni nasekufumaneni le noveli imangalisayo kulwandle lweencwadi kunye neemvakalelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Amava amnandi okufunda incwadi ngeempumlo
UMBONO WABO WANGU-DUSTIN HOFFMAN KANYE ANDIXELELI KWIMOVIE ENKULU OKANYE OKANYE incwadi ebalaseleyo yeyenye yeencwadi zam zokuqala kwilayibrari yam ewe inkosi ingcebiso elungileyo
Ukusuka eGranada ukuya eBaghdad: I-5 Unesco Cities of Literature